“नदी सभ्यतामा आधारित शहरीकरण सुन्दर र आकर्षक हुन्छ” : मुख्यमन्त्री पोखरेल – Nepal Japan
नेपाल जापान २३ आश्विन ००:११
५ नं. प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) लाई टुङ्गो लगाएको छ । निकै बिरोध, प्रदर्शन र संसदभित्रको तोडफोडकाबीच प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी घोषणासँगै लुम्बिनी प्रदेशवासीले साझा पहिचान प्राप्त गरेका छन् । दाङका राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाको राप्ती तटीय क्षेत्रको मैदानी भागलाई जोडेर देउखुरी उपत्यकालाई स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको हो । अब यस क्षेत्रमा राजधानीको भौतिक संरचना कस्तो हुने, राजधानी बनाउँदा कस्तो परिकल्पना गरिएको छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर मुख्यमन्त्री पोखरेलसंँग भरत केसी र नीरा गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः